Kanjani ngokushesha ohlweni olusuka bonke Instagrame: 3 Izindlela anfollovinga osheshayo
Izibalo zibonisa ukuthi abantu yokuxhumana Instagram namuhla sawela embundwini ayizigidi 700. Ukuthandwa platform yayo inikeza ukusebenza lakhelwe abantu creative: lokusebenza ikuvumela ukuba wabelane ngezithombe.
Eminyakeni embalwa edlule ukusebenza Instagrama kakhulu washintsha: gone komkhawulo ekwandiseni isithombe amakhadi, kwakukhona ukuthi kungenzeka ukushicilela amavidiyo iminithi, futhi yethulwa isici evumela ukuthi ukusakazwa bukhoma. Bheka isihloko esithi "Umlando" (. English "Izindaba") Ukuze izithombe namavidiyo kuyoba ukususwa ngokuzenzakalelayo amahora 24 ngemuva kokushicilelwa - Lesi sici, njengoba kwaphawula u-Insta-abasebenzisi, lets hhayi clog akhawunti okuthunyelwe engadingekile. Eminyakeni embalwa edlule, Instagram lizimelele ezimpilweni zabantu abavamile kanye Internet iye yaba umbuso real online.
Izigidi abasebenzisa Instagram, hhayi kuphela njengoMhlengi uyisiphephelo komsebenzi wakhe wokudala, kodwa futhi zangisiza ekwenzeni imali, futhi inkulumo encane. Umnini-akhawunti ophumelelayo ukwazi indlela ngokushesha ohlweni olusuka bonke Instagrame ngoba lolu lwazi ikuvumela ukulungisa izilaleli futhi ukwandisa ithonya labo kuyo.
Landela - Yekela ukulandela
"Bhalisa" ivumela abasebenzisi ukuba niqaphele amanye ama-akhawunti: emva ngokucindezela "Classifieds Landela" inkinobho amaphrofayli ukushicilela nezinye izibuyekezo ziyobonakala ekhasini eyinhloko isicelo Instagram - ezindabeni.
I okubhaliselwe kungaba kokubili nabangane nabantu obajwayele, futhi udumo izindaba, noma amanye ama-akhawunti thematic.
Ngezinye izikhathi, ngenxa follovinga ngokungakhethi, ngaphansi okubhaliselwe Umsebenzisi kukhona amaphrofayli amaningi kakhulu owengeziwe, lapho-ke kuholela odla feeds update. Kulokhu, kuziwa usizo imisebenzi uzikhiphe ohlwini: pair of eskrinini - okubhaliselwe engadingeki usehambile. Uma ufuna ngokuphelele okubhaliselwe ehlanzekile futhi uqale ukuhola iphrofayela Instagram kusuka ekuqaleni ngaphandle ulwazi udoti feed izindaba kumele kukhiqize anfolloving okukhulu.
Zikhiphe ohlwini e esenezelwe
In the version umile of Instagram iwebhusayithi noma isenzo isicelo «ukungalandeli» itholakala kuphela enye ifomethi sikukhiphe ohlwini. Isikhathi ohlweni olusuka zonke zohlelo ayikuvumeli Instagrame.
Chofoza isithonjana iphrofayela ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini. Vula siqu izincwadi ikhasi lakho.
Iya "Okubhaliselwe" sigaba ngokuchofoza inombolo yama-akhawunti ukuthi zafollovili.
Ngo ohlwini oluvelayo, ukuthola iphrofayela zakabani ungasaboni ezithakazelisayo.
Chofoza ku- "Okubhalisile", etholakala okuphambene iphrofayli nick.
Phinda izinyathelo nge-akhawunti ngayinye, izindaba zazo ungafuni ukubona ezindabeni.
Qaphela: otpisyvayas kusuka akhawunti avaliwe (amaphrofayli ngokufinyelela okunqunyelwe), umsebenzisi uzothola isexwayiso esivela Instagram: uzikhiphe ohlwini emva yokubuka leli khasi ngeke kwenzeke. Buyisela ukufinyelela ezincwadini iphrofayli kuyoba ngemva kokuqinisekisa yomnikazi we-akhawunti ukuthumelele isicelo sokubhalisa.
Izibuyekezo ku abathintekayo ukuphathwa akhawunti yesevisi nge-PC. Ngakho, uhlu efanele okubhaliselwe kungenzeka nje kuphela ngezinto isicelo mobile, kodwa futhi nge-website esemthethweni. Bephumelele inqubo ukugunyazwa, umsebenzisi uthola ukufinyelela iphrofayela yakho siqu, okuyinto engenza inqubo a "iphuzu" anfollovinga. Kodwa inkinga, njengoba ilungelo ohlweni olusuka wonke umuntu Instagrame, namanje uhlala ezingaxazululeki. Kulokhu, ukuza isicelo usizo, ukuqapha ukugeleza izethameli kwi-akhawunti ethize.
Kanjani ngokushesha ohlweni olusuka bonke Instagram: 3 inkonzo engcono
amathuluzi okukhethekileko software for Android and iOS amapulatifomu. Ziklanyelwe ukusebenza izihlwele, kuzokwenza kube lula inqubo ukuhlanza okubhaliselwe.
Kanjani ngokushesha ohlweni olusuka bonke Instagrame ngaphandle kokuzama poodinochnyh ukuchofoza? Sebenzisa amasevisi third-party, ogama ukusebenza inikeza umsebenzi kude Insta-sephrofayela! Uhlu olulandelayo izinhlelo ukuxazulula inkinga ngokushesha ohlweni olusuka bonke Instagrame phakade.
Acashile Instant for Instagram
Amathuba Umbuso zenzelwe abasebenzisi yesikhulumi Android ebanzi ngokwanele. Ngokwesibonelo, abantu abaningi iyatholakala futhi anfolloving abakhethayo, ukukhanselwa uthanda, susa okuthunyelwe kanye ababhalisile yokuvala. Ukusebenzisa isicelo kufanele ufake imininingwane ye-akhawunti.
Acashile for Instagram
Uhlelo kuyinto isicelo etholakalayo ku-App Store. Ngemva kokufaka kanye login akhawunti, kudingeka ukuthi iya esigabeni elise phezulu imenyu. Kufanele wasibekela kwemigomo ukususwa okubhaliselwe (ukwelashwa non-okuhambisanayo abasebenzisi noma anfolloving mass). inkinobho "Qala uJobe" uzoqala umsebenzi. Futhi iyatholakala eziningana imisebenzi eyengeziwe.
Kanjani ngokushesha ohlweni olusuka zonke Instagrame e-computer? Iningi amathuluzi avela eceleni ukuthi enze umsebenzi ofanayo, itholakala mahhala. Engingakusho nje ukhombe wohlu noma imuphi umbuzo injini "ukugwema mass Instagram", futhi ngenxa yalokho ngeke anikele Izinsiza ethandwa edingekayo lapho uya khona. Ngokwesibonelo, Unfollowgram inkonzo kuzosiza ababhalisile ugcine ithrekhi non-okuhambisanayo noma kweso ohlweni olusuka wonke umuntu Instagrame. Iskriphthi futhi isebenza ne-Twitter amaphrofayli yokuxhumana.
On uzikhiphe ohlwini ngokushesha kangakanani kuzo zonke e Instagrame, zibonisa abantu hhayi kuphela abavamile kodwa osomabhizinisi, wahlanganyela ukukhuthazwa ibhizinisi labo ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi.
Ngeshwa, izinhlelo okokukhetha akukwazi ngendlela enesizotha ukuqinisekisa ukuphepha idatha yomuntu siqu (lomsebenzisi, iphasiwedi, nezinye ulwazi lephrofayela). Ngakho-ke, ukusebenza akhawunti ababukeli sina, kunconywa ukuthenga irobhothi ekhethekile benta imisebenti leminyenti. Ngokwesibonelo, ukuhlanza njalo uhlu okubhaliselwe. Kuyaphawuleka ukuthi isofthiwe efanayo in the domain yomphakathi ayitholakali.
Ukusebenzisa amasevisi third-party ukukukhipha ohlwini ngokuzenzakalelayo kusuka ku-akhawunti yomunye umsebenzisi, kubalulekile ukukhumbula ukuthi yokuhlanza njalo futhi esebenzisa inkonzo ekhethekile isofthiwe Instagram kubhekwa njengento umsebenzi osolisayo. Ukusetshenziswa okweqile izinhlelo okungagunyaziwe kanye izicelo kungaholela ekumisweni okwesikhashana kwe-akhawunti yakho. Qaphela!
Okufanele ukwenze uma "Instagrame" Ikhodi yokuphepha akezi?
Indlela ukuvula ikhasi le "Ofunda nabo" kulula futhi elula
Ngenza kanjani ukwazi usuku lokubhalisa "VKontakte" - imininingwane
Indlela yokwenza selfie enhle? Izinkombandlela ngokudala selfie mega
Kanjani ukubona abangane ezifihliwe VKontakte hhayi abanjwe ngokwakho?
Thrombophlebitis - Iyini? Izimbangela, nokuvinjelwa thrombosis. Thrombophlebitis yezingalo nemilenze aphansi
Ukuqagela ku ubhontshisi nokunye.
Indlela ukupheka banana roll: zokupheka
Kungani izinhlanzi zamakati ne-mew?
Sikhetha izivivinyo zakudala zamadoda
"Panthenol" umbimbi: libuyekeza abesifazane. Indlela yokusebenzisa "Panthenol" umbimbi